gabay dahaarka dahaarka bireed dahaadhay |
gabay dahaarka dahaarka bireed dahaadhay
Ku habboon codsiyo badan oo kala duwan, waxaa loo isticmaali karaa sida dahaarka iyo lakabka uumiga uumiga ah ee qalabka dahaarka badan, oo leh iska caabin gabow oo wanaagsan iyo iska caabbinta daxalka.
Dahaarka dahaarka leh ee soo wajahan waa dusha sare ee qalabka dahaarka. Waa lakab dheeri ah oo ka samaysan bireed Aluminium ah ama filim PP ah. Insulation -ku wuxuu u dhaqmaa sidii caqabad dheeri ah oo ka caawisa dhismaha dhismaha qoyaanka iyo waxyeellada ka timaadda walxaha.
Dahaarka dahaarka leh ee soo foodsaaray wuxuu bixiyaa saddex xal oo dahaar leh oo la qiimeeyo: ilaalinta kaamerada, uumiga uumiga, iyo dab ololiyaha. Sifooyinkaan, oo wada jira, ka caawinta nidaamka dahaarka inay la kulmaan xeerarka dhismaha, gaaraan hufnaan tamar wanaagsan, iyo xakameynta uumiga.
Waxaa loo adeegsaday isku-xidhka agabyada kala-goynta ee kala duwan sida dhogor dhalada ah, dhogor macdan ah iyo dhogor dhagaxa, waxaa loo adeegsan karaa khadka wax-soo-saarka iyo sidoo kale dib-u-xiridda buugga, oo leh dabacsanaan iyo codsiyo kala duwan oo ballaaran.
Waxaa loo isticmaali karaa dahaarka kuleylka iyo walxaha xirmada biyuhu. Wixii dhogor dhalada ah, dhogor dhagaxa ah, dhogor macdan ah iyo qalabka kale ee kuleylka kuleylka, dahaarka kuleylka-daboolidda iyo lakabka uumiga uumiga, suufka, iyo suufka dahaarka kuleylka kuleylka ee khadka tooska ah, si loola kulmo mareenka HVAC, tubbada biyaha qabow iyo diirran Adiabatic iyo uumiga bamer baahiyaha iyo shuruudaha dahaarka ee dhismaha birta.
Sidoo kale Waxaa loo isticmaali karaa sidii wax kuleylka kuleylka dhismaha (saqafka, derbiga).
Qolofyada hawo -qaboojiyaha iyo kululeeyaha biyaha ayaa dahaarka ka ilaaliya dhuumaha biyaha iyo tuubada hawo -qaadashada
Saameyn shaabadaysan oo wanaagsan
Waxay ku habboon tahay in lagu xiro kala -goysyada/tollada ka hortagga qoyaanka iyo uumiga ku -xirnaanta jaakad -bireedka. Ku habboon shaabado kale oo badan oo joogto ah, haynta, kabidda ama codsiyada wejiga oo u baahan badbaadinta ay bixiso taageeridda bireed.
7mic aluminium -bireed/ PE/ kraft
Kraft -bireedka aluminium ee isku -dhafan, ma jiro mesh galaas
7mic Foil/ PE/ space 12.5*12.5mm, mesh squarefiberglass/ Kraft
mesh fiberglass laba jibbaaran, muuqaal ahaan xarrago leh
Hore: Dahaarka-bireed dahaaray dahaarka bireed
Xiga: Cajalad Mareenka Marada ah
Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda
Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya
Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed
Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh
Dahaarka-bireed dahaaray dahaarka bireed
Bireed-PE-xidhkii dahaarka dahaarka bireed
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Sharooto,